Umkhiqizi wefektri wePVC neChina Fektable China Zhongmaohua
Amagilavu ​​we-PVC alahlwayo
Amagilavu ​​e-PVC alahlekayo amagilavu ​​epulasitiki alahliwayo, okuyimikhiqizo ekhula ngokushesha embonini yegilavu ​​yokuvikela. Abasebenzi bezokwelapha nabasebenza embonini yokudla bayawubona lo mkhiqizo ngoba amagilavu ​​e-PVC akhululekile ukuwagqoka, ukuguquguquka ukusebenzisa, awanazo izithako zemvelo ze-latex, futhi ngeke kubangele ukungezwani komzimba.
Inqubo yokwenza umkhiqizo
Ukuhlola okusajwelwe okokusebenza okungafani nokwenziwa kwamakhola → ukusetshenziswa kwe-collar → okuvusa imfashini → ukuhlolwa kokugcina ukungcola → ukuhlolwa → ukusetshenziswa okuseceleni → ukucwilisa → ukuconsa → ukomiswa kwamaphepha oma 3. Ukubumba ipulasitiki → ukuqothuka kokushisa nokupholisa → ukumiswa kwe-PU noma i-powder emanzi → ukuchela → Ukudumisa → Ukukhishwa kwangaphambi kokuqala
Umsebenzi wasendlini, owobuchwepheshe, owamakhemikhali, owemanzini, wengilazi, wokudla nokunye ukuvikela kwefekthri, izibhedlela, ucwaningo lwesayensi kanye nezinye izimboni; isetshenziswa kabanzi ekufakweni kwama-semiconductors, okwangempela okuqanjwa okokusebenza kwamathuluzi we-elekthronikhi kanye nokusebenza kwezinsimbi ezinamathelayo zensimbi, ukufakwa komkhiqizo wobuchwepheshe obuphakeme kanye nokushintshanisa kokushayela ama-Disc okushayela, izinto eziyinhlanganisela, amamitha wokubonisa we-LCD, imigqa yokukhiqiza yamabhodi wesifunda, imikhiqizo ye-optical, ama-laboratories, izibhedlela, onobuhle neminye imikhakha.
Amagilavu ​​we-PVC alahlekayo (izithombe ezi-3)
Izindawo ezihlanzekile ezifana nama-semiconductors, ama-microelectronics, ama-LCD ekhombisa nezinye izinto ezibucayi, ezokwelapha, ezemithi, ezobunjiniyela bebhayoloji, ukudla nesiphuzo, njll.
1. Ukuthokomala ukugqoka, ukugqoka isikhathi eside ngeke kubangele ukungezwani kwesikhumba. Lungiselela ukuhamba kwegazi.
2. ayiqukethe amakhompiyutha e-amino nezinye izinto eziyingozi, futhi kuyaqabukela kubangela ama-allergies.
3. Amandla amakhulu ashubile, ukumelana ne-punct, futhi akukho lula ukuwaphula.
4. Ukubekwa uphawu okuhle, okusebenzayo kakhulu ukuvikela uthuli ekubalekeleni ngaphandle.
5. Ukumelana okuhle kwamakhemikhali nokumelana ne-pH ethile.
6. Izithako ezingakhokhelwa yi-Silicone, ezinezakhi ezithile ze-antistatic, ezilungele izidingo zokukhiqiza zomkhakha wama-elekthronikhi.
7. Ingaphansi lezinsalela zamakhemikhali ezingaphezulu, phansi kokuqukethwe kwe-ion, nokuqukethwe okuyizinhlayiyana, okulungele imvelo ehlanzekile yekamelo.
Lo mkhiqizo awunazo izandla zesobunxele nezingakwesokudla, ngicela ukhethe amagilavu ​​alungele ukucaciswa kwesandla sami;
Uma ugqoke amagilavu, ungafaki izindandatho noma ezinye izesekeli, unake izipikili zokunquma;
Lo mkhiqizo ukhawulelwe ukusetshenziswa kwesikhathi esisodwa; ngemuva kokusebenzisa, sicela uyiphathe njengodoti wezokwelapha ukuvikela ama-pathogen angcolise imvelo;
Kwenqatshelwe ngokuqinile ukuhambisa ngokuqondile ukukhanya okuqinile njengokukhanya kwelanga noma imisebe ye-ultraviolet.
Izimo zokugcina nezindlela
Kufanele igcinwe endaweni yokugcina impahla epholile futhi eyomile (okushisa ngaphakathi kungaphansi kwama-30 degrees futhi umswakama wesihlobo mhlawumbe ungaphansi kwama-80%) eshalofini elingu-200mm kude nomhlaba